Akwukwo Akwukwo - Ndi n’iru ahia n’iru mmanu mmanu | AromaEasy
Category Archives: nkwụnye
Ike nkwụnye & tinyekwa Typedị O
A na-eji Ydị O Odị O naanị na Thailand. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile nke ụwa na plọg / ntọala ha dị iche iche) Odị O soket na plọg, nke edepụtara na 16 amps, bụ ụkpụrụ gọọmentị na Thailand. Ezubere usoro nkwụnye ahụ na 2006, mana ojiji ya agbasaghị ebe niile. Ọ […]
Ihe na nkwụnye	Hapụ ikwu
Ihe nkwụnye ọkụ & ntinye Ndị N
Ydị N Ndị N na-eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị Brazil na South Africa. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile na plọg / ntọala ha dị iche) )dị N na plọg bụ ọkọlọtọ gọọmentị na Brazil na South Africa. Ihe plọg ahụ nwere mkpịsị abụọ na ntanye ala. Enwere uzo abuo: prongs […]
Ike plọg & tinyepụ ụdị M
Ydị M Mdị M ka a na-eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na South Africa, Swaziland na Lesotho. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile na-eji ụdị M) Ihe nkwụnye a yiri nke India ụdị D, mana ntụtụ ya buru ibu. Mdị M bụ nkwụnye 15 amp, o nwekwara ụdọ atọ gbara gburugburu nke mejupụtara triangle. Ihe […]
Power plọg & tinyekwa Typedị L
Ydị L Ldị L ka a na-eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nanị Italytali, Chile, Uruguay ma a na-ahụkwa ya na North Africa. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile na-eji ụdị L) plugkpụrụ nkwụnye / nkwụnye ntọala nke ,tali, CEI 23-16 / VII, gụnyere ụdị abụọ e depụtara na 10 na 16 amps. Abụọ nkwụnye top ekwekọghị mejupụtara atọ […]
Ihe nkwụnye ọkụ & ntinye Typedị K
Ydị K Kdị K eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ naanị Denmark na Greenland. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile na-eji ụdị K) A kọwara ọkọlọtọ Danish na DS 60884-2-D1. N'adịghị ka ụdị nkwụ E yiri nke ahụ, a naghị agbanye ntụtụ ala n'ime igbe ahụ, mana ọ dị na plọg n'onwe ya. Na U ekara earthing ntụtụ […]
Ihe nkwụnye ọkụ & ntanye Jdị J
Ydị J Jdị J ejirila ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Switzerland na Liechtenstein. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile na-eji ụdị J) Switzerland nwere ọkọlọtọ nke ya nke akọwara na SEC 1011. Ihe nkwụnye a yiri nke C, belụsọ na ọ nwere mgbakwunye nke mgbakwasa ala. Type J plọg nwere atọ 4 […]
Power plọg & tinyekwa Typedị M
Ydị M Typedị M ka a na-ejikarị na Australia, New Zealand, Papua New Guinea, China na Argentina. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile na-eji ụdị m) Nke a 10 amp plọg nwere abụọ ewepụghị 1.6 mm oké pupụtara, setịpụrụ na 30 Celsius na vetikal, na-akpụ isi na-ala V. Ha emmepe ha gafere 13.7 mm [… ]
Ike plọg & tinyepụ ụdị H
A na-eji Hdị H Hdị H naanị na Israel na Palestine. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile nke ụwa na plọg / ogwe aka ha dị iche) Ihe nkwụnye 16 amp a bụ nke earthed dị iche na Israel. O nwere ihe mgbochi atọ 4.5 mm gburugburu, na-atụle 19 mm n'ogologo ma na-akpụ triangle. Ebe etiti nke akara […]
Nkwụnye ikike & tinyekwa Gdị G
Ydị G Gdị G bụkarị ndị United Kingdom, Ireland, Cyprus, Malta, Malaysia, Singapore na Hong Kong. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile na-eji ụdị G) Ihe ntinye 13 amp a nwere akụkụ anọ nwere akụkụ anọ nke na-etolite triangle isosceles. Etiti ụwa ntụtụ bụ 4 site 8 mm na 22.7 mm […]
Ike plọg & tinyepụ ụdị F
A na-eji Ydị F Fdị F, dịka ọmụmaatụ, na Germany, Austria, Netherlands, Sweden, Finland, Norway, Portugal, Spain na Eastern Europe. (Pịa ebe a maka ndepụta zuru ezu nke mba niile na-eji ụdị F) A na-akpọ Plug F dị ka CEE 7/4 na nke a na-akpọkarị "Schuko plọg", nke bụ okwu nchịkwa nke "Schutzkontakt", okwu German nke pụtara "kọntaktị nchedo" [ …]
Etu esi emezi Sanitizer na ulo 2 Comments
Mmanụ dị mkpa maka mgbu azụ 3 Comments